Ny fototry ny atidoha: Neuroplasticity | Valin'ny Fanamarinana
Ny teny hoe neuroplastique dia mihodina rehefa neuro ho an'ny "neuron", ny sela ao amin'ny atidoha sy ny rafi-pitia. Plastic dia ho an'ny "azo ovaina, azo zahana, azo ovaina." Ny neuroplasticity dia manondro ny fahafahan'ny ati-doha miova ho setrin'ny zavatra niainany. Ny atidoha dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny sela nerveuse ary manalefaka ny fifandraisana misy eo amin'ny hafa. Izany no itehirizan'ny ati-doha fahatsiarovana, ianarana, tsy mianatra ary ampifanarahana amin'ny tontolo miovaova. Fitsipika roa mifehy ny plastika ao amin'ny ati-doha:
voalohany, 'sela nerve izay miara-mirehitra miaraka' dia midika fa ny hetsika roa dia mety hanjary hifandray mafy raha toa ka miseho miaraka. Ohatra, ny zazakely mikasika fatana mafana voalohany dia mampihetsika ny sela nerveux izay manodina ny fahitana ny fatana ambony sy ny selam-pitatitra izay mahatsapa fanaintainana mirehitra. Ireo hetsika roa tsy misy ifandraisany teo aloha dia lasa mifamatotra maharitra ao amin'ny ati-doha amin'ny alàlan'ny sampan'ny sela. Ny fahitana voalohany sary manaitaitra ny filan'ny nofo dia miteraka fahatsiarovana raikitra ao amin'ny atidohan'ny zaza ary manomboka mamolavola ny môdely manaitaitra azy.
faharoa, 'ampiasao izy na very' dia mety indrindra mandritra ny fikandrana fampandrosoana sasany. Izany no antony mora kokoa amin'ny fianarana fahaiza-manao na fitondran-tena manokana amin'ny taona sasany. Tsy mahita gymnast Olaimpika manomboka amin'ny 12 taona na mpitendry mozika an-tsehatra manomboka amin'ny faha-25 taonany isika. Tsy toy ny zazakely, tanora mijery sary vetaveta no mampifandray zavatra ivelany sy ny faritra misy azy noho ny fientanam-po. Ny fahatanorana dia fotoana hianarana momba ny firaisana. Ireo sela nerveurs tafiditra amin'ny fitetezana Internet sy ny fipihana avy amin'ny sehatra iray hatrany amin'ny afo miaraka amin'ireo izay manaitaitra ara-nofo sy fahafinaretana. Ny rafi-tongotra aman-tanany dia manao ny asany fotsiny: mikasika fatana = fanaintainana; tranokala mamoafady = fahafinaretana. Ny fampiatoana hetsika iray dia manampy hampihena ny fiarahana.
Ny atidohantsika dia ao anatin'ny rafi-pitatitra mitatra. Izy io dia misy ny rafi-pitabatabana afovoany (CNS) sy ny rafi-pitabatabana peripheral (PNS). Ny CNS dia misy ny ati-doha sy ny tadin'ny hazondamosina. Izy io dia ivon-toerana fanaraha-maso izay mandray ny fampahalalana rehetra momba ny fahatsapana avy amin'ny vatana iray manontolo izay afaka mamaky ny pejy mba hampavitrika ny valiny- fomba fiasa mifandraika, misintona na 'toa anao'. Mikasika ireo valinteny manokana dia mandefa famantarana amin'ny alàlan'ny PNS izy. Noho izany ny sary erotika, fofona, fikasihana, tsiro na fikambanan-teny dia handoro ireo lalan-doha amin'ny filan'ny nofo avy amin'ny ati-doha mankany amin'ny taovam-pananahana amin'ny alàlan'ny rafi-pitatitra ao anatin'ny segondra iray segondra.
Ny ati-doha dia manana manodidina ny 86 lavitrisa sela na neurônaly. Ny sela neuron na nerve dia manana vatan'ny sela izay misy ny atiny misy fitaovan'ny ADN. Zava-dehibe dia misy koa proteinina miova endrika rehefa miova amin'ny fampidirana vaovao avy any an-kafa izy ireo.
Ny fahasamihafana dia tsy mitovy amin'ny sela hafa ao amin'ny vatana satria:
1. Ny sela dia manana sela manokana voafantina dendrites ary axons. Ny dendrite dia miteraka famantarana ara-elektika amin'ny vatan'ny sela ary ny axonons dia maka fanazavana amin'ny vatan'ny sela.
2. Ny nifaneraserana dia mifampiresaka amin'ny alalan'ny fizotran'ny electrochemical.
3. Ny endriky ny neurons dia misy rafitra manokana (ohatra ny synapses) sy ny zavatra simika (ohatra ny neurotransmitters). Zahao etsy ambany.
Ny nosy dia ny efitranon'ny iraka ao anatin'ny rafi-pitabatabana. Ny andraikitr'izy ireo dia ny mamindra hafatra avy amin'ny ampahany iray amin'ny vatana mankany amin'ny iray hafa. Izy ireo dia mikasika ny 50% ny sela ao amin'ny atidoha. Ny iray hafa eo amin'ny 50% dia sela goavana. Ireo no sela tsy neuronaly izay mitazona homeostasis, mamorona myelin, ary manome fanohanana sy fiarovana ho an'ny neurônina ao amin'ny rafi-pitabatabana sy ny rafi-pitabatabana. Ny cellules glial dia manao ny fikojakojana toy ny fanadiovana ireo sela maty ary manamboatra ny hafa.
Ny neurônina dia mamorona izay heverintsika ho 'zava-maitso'. Raha ny axon, izay mety ho lava na fohy, dia voalain'ny fotsy fotsy (myelin), dia mamela ny fampahalalam-baovao handalo haingana kokoa. Ity loko fotsy na miorim-panafody ity dia antsoina matetika hoe 'fotsy hoditra'. Ireo dendrites izay nahazo fampahalalana dia tsy mahazo mionona. Ny atidoha dia miditra amin'ny faritra sy ny lalan'ny atidoha. Mampihena ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fampiasana ranomanitra.
Sary famantarana elektrôla sy simika
Ny neurônintsika dia mitatitra hafatra amin'ny endriky ny herinaratra elektrika antsoina hoe fitarainana nerveure na hetsika mety. Mba hahatonga ny fikorontanan'ny nieren-doza, dia tsy maintsy mientanentana loatra ny neurons, noho ny eritreritra na ny traikefa, mba handefa onjam-pandringanana ny halavan'ny sela mba hamporisika na hanakanana ny neurotransmitters amin'ny farany amin'ny axon. Ny endri-tsoratra toy ny hazavana, sary, feo na tsindry dia manenika ny atin'ny fo mitera-doza. [/ X_text] [/ x_column] [/ x_row]
Ny fampahalalana dia afaka mikoriana avy amin'ny neuron iray ho an'ny neuron iray hafa amin'ny andalana na ny banga. Tsy mifankatia ny neurons, ny synapse dia diky kely misaraka miavaka. Ny Neurons tsirairay dia misy eo anelanelan'ny 1,000 sy 10,000 fifandraisana na 'synapses' miaraka amin'ny hafainganam-pandrefesana hafa. Ny fahatsiarovana dia ho noforonina amin'ny fifangaroan'ny neurônin'ny fofona, ny maso, ny feo ary ny fifamoriana.
Rehefa mihetsiketsika ny tsindrona nerveux na ny mety ho fihetsiketsehana ary tonga any amin'ny faran'ny axon eo am-pamaranana azy dia miteraka fomba hafa. Ao amin'ny terminal dia misy vesicle (sacs) kely feno neurochemical isan-karazany izay miteraka karazana valinteny samihafa. Ny famantarana samihafa dia mampihetsika ireo vesicle misy neurotransmitter samihafa. Ireo vesicle ireo dia mifindra any amin'ny faran'ny terminal ary mamoaka ny atiny ao anaty synaps. Miala amin'ity neuron ity manerana ny fihaonan-doha na synaps ary manaitaitra na manakana ny neuron manaraka.
Raha misy ny fihenan'ny na ny habetsaky ny neurochemical (oh: Dopamine) na ny isan'ny mpandray, dia lasa sarotra ny mampita ilay hafatra. Ny olona voan'ny aretina Parkinson dia manana tsy fahaizan'ny signaling dopamine. Ny haavon'ny neurochemicals na receptorer avo kokoa dia mandika hafatra na làlan'ny fitadidiana matanjaka kokoa. Rehefa mampiasa pôrnôgrafia mampihetsi-po be ny mpampiasa pôrnôgrafia dia lasa mavitrika sy mihamatanjaka ireo lalana ireo. Mora mandalo azy ireo ny riaky ny herinaratra. Rehefa miala amin'ny fahazarana ny olona iray dia mitaky ezaka kely ny fisorohana an'io lalan'ny fanoherana faran'izay kely sy mora mikoriana io.
Neuromodulation dia ny batana dinika neuron dia mampiasa orinasa iray na maromaro kokoa hifehezana ny karazana neurons isan-karazany. Mifanohitra amin'ny kilasy izany synaptic transmission, izay misy ny neuron presynaptic dia mivantana mivantana avy amina mpiara-miombon'antoka postsynaptic, fampitam-baovao iray amin'ny iray. Ireo neuromodulators nateraky ny vondrona neon-nify kely dia manjavona amin'ny faritra lehibe amin'ny rafi-pitabatabana, izay misy fiantraikany amin'ny neurons maro. Ny neuromodulators lehibe ao amin'ny rafitra amperin'asa dia ahitana dopamine, serotonin, acetylcholine, histamine, ary norepinephrine / noradrenaline.
Ny neuromodulation dia azo heverina ho toy ny neurotransmitter izay tsy naverina neritreretina avy amin'ny neuron taloha na synaptic na rava anaty metabolite. Ireo neuromodulators toy izany dia mamarana fotoana be dia be ao amin'ny cerebrospinal fluid (CSF), mitaona (na "modulateur") ny asan'ny neurons maro hafa ao amin'ny atidoha. Noho izany antony izany, ireo neurotransmitter sasany dia heverina ho neuromodulators, toy ny serotonine sy acetylcholine. (jereo wikipedia)
<< Fampivoarana ny atidoha Neurochemicals >>